Impilo yamawele – iAfrika
Kunesithombe esake sasabalala ezinkundleni zokuxhumana kanye nasemaphephandabeni esiZulu, la okubanakala intombi egcagca nezinsizwa ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lesi sithombe sisuse omkhulu umsindo, abantu bebabaza ishobolo elenzeka esikweni lakithi kwaZulu. Sithe akesisike elijikayo sichaze ngempilo yamawele abuye abizwe ngokuthi amaphahla.
Ngokwesintu kuyihlazo elibi kabi ukuthi intombi idayise ngesibaya sikayise kubantu abahlukene, kuba elikhulu kakhulu uma kuzothiwa isigcagce nezinsizwa ezimbili ngoba phela isithembu esamadoda kanti ke nobusoka bentombi abaziwa nhlobo ngisho emandulo. Ngabe ngihubhuza akabhejane uma ngithi nginesiqiniseko ngokubikwa ngesithombe nangalentokazi enesithembu, kodwa ke uma kuwukuthi lentokazi ibigcagca newele akusilo ihlazo lelo ngoba phela kunemigudu elandelwayo uma kugcagcelwa noma ke uma kunesifo uma kufihlwa iwele.
Ngokwesintu amawele athathwa njengomuntu oyedwa, lokho kusho ukuthi kusuka ebunganeni bawo aze akhule enzelwa izinto ngokufana awahlukaniswa, ngisho esekhulile ke noma esikhuliswa ngokwesintu awahlukaniswa. Lokho kusho ukuthi uma ligcagcelwa elilodwa kuba umgcagco wawo omabili, kanti ke noma kuthunwa kuba yiso leso. Ake siqale ngale yokwenda kwewele elilodwa, uma kudlule iwele emhlabeni, ngelanga lokufihlwa kuqala kungene leli eliphilayo emgodini okuzofihlwa kuwo iwele elendile, uma selingenile emgodini, limbathiswa ingubo njengoba kusuka kwenziwa esidunjini. Emuva kwalokho lithelwa kancane ngenhlabathi sakugqitshwa bese liyakhishwa emgodini kulandele ukufihlwa kwaleli elendile selifihlwa. Noma sekugcagcelwa elilodwa uma kwenziwa njalo futhi, umakoti lo osuke ezogana owagana omabili njengoba engahlukaniswa, kodwa ke lokho akusho ukuthi leli elinye iwele ngeke lisaganwa kodwa uma nalo seziwushaya kulo liyokwembeswa njengalo leli elinye iwele kwenziwe ngendlela efanayo nakhona.
Tags Amaphahla, Amawele